Ukushisa komhlaba kunganciphisa ubukhulu bezilwane ezincelisayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukushisa komhlaba kunganciphisa izilwane ezincelisayo
Akekho owayekulindele, kepha lokho kuyisiphetho sesifundo esishicilelwe ephephabhukwini i-Science Advances: ukufudumala kwembulunga yonke kunganciphisa ubukhulu bezilwane ezincelisayo, njengoba kwakwenzekile eminyakeni engaba yizigidi ezingama-56 edlule, cishe eminyakeni eyizigidi eziyi-10 ngemuva kokuphela kwama-dinosaurs.
Ngaleso sikhathi, Izinga lokushisa lomhlaba lenyuke phakathi kwama-5 no-8 degrees Celsius eminyakeni eyi-10.000 XNUMX, futhi yahlala iphakanyisiwe iminyaka eyi-170.000 ngaphambi kokubuyela kokujwayelekile.
Isibonelo se- "dwarfing" sitholakale eSifrhippus, okwakuyi-equid yokuqala. Lesi silwane sinciphe okungenani ngama-30% phakathi neminyaka yokuqala eyi-130.000 yokufudumala. Njengoba izinga lokushisa lomhlaba libuyele kwesijwayelekile, usayizi womzimba wakhe wakhula ngama-76%. Kepha akuyena yedwa.
Abaphenyi bakukhombisile lokho leli phethini ligcinwa ngisho nasemicimbini lapho ukufudumala kungenkulu kangako, njengaleyo iplanethi ebhekene nayo namuhla. Kungakho umcwaningi u-Abigail D'Ambrosia wase-University of New Hampshire ethe "ngeshwa, namuhla isivivinyo esikhulu." Umbuzo uthi, kungani?
Isithombe - UDanielle Byerley
Ezindaweni lapho isimo sezulu sifudumele khona, izilwane ezincelisayo zivame ukuba zincane kunalezo ezipholile. UD'Ambrosia uyakuchaza lokho lapho amazinga okushisa ephezulu, usayizi omncane usebenza kahle emzimbeni, ngoba ungaphola kangcono.
Yize kunezinye izizathu zokuthi kungani izilwane zingaba ncane, njengokuntuleka kokudla noma amanzi, izinga lokushisa liyimbangela ethinta zonke izinto eziphilayo. Ngakho-ke, ngokusho kocwaningo, esikhathini esizayo kungenzeka ukuthi izinhlobo eziningi zezinto eziphilayo esizaziyo namuhla zizoba ncane kunalezo namuhla.
Ungafunda isifundo esigcwele lapha (KungesiNgisi).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ukushisa komhlaba kunganciphisa izilwane ezincelisayo
Izintshisakalo ngentwasahlobo ka-2017